Fandriam-pahalemana : Dinihina ny hamerenana ny fampiharana ny DINA manerana ny Faritra
mardi, 21 juin 2022 15:55
Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo ny alatsinainy 20 jona hariva ny solontena avy amin’ireo Solombavambahoakan’i Madagasikara, niara-nidinika momba ny fikasan’izy ireo hanatsara ny fandriam-pahalemana manerana ny Nosy.
Araka ny fanazavàna nentin’ireto solontena ireto dia heverina fa manampy amin’ny fifehezana ny fandriam-pahalemana ny fampiharana ny DINAn’ny Faritra.
Teo no nipoiran’ny hevitra hikatsahana ny tombontsoa iombonan’ny Malagasy rehetra, ka nitovian’ny fomba fijery, dia ny hamerenana ny fampiharana ny DINA manerana ny Faritra 23, araka ny fifanarahana nisy eo anivon’ny fokonolona eny ifotony sy tapaka teny anivon’ny fitsarana.
Ny tanjona amin’izany dia ny handraisan’ny olom-pirenena andraikitra amin’ny fitandroana ny fandriam-pahalemana miaraka amin’ireo mpitandro ny filaminana.
Hisy ny atrikasa fivoriana hiarahan’ireo Solombavambahoaka, hahatongavana amin’ny fanatanterahana izany fanapahan-kevitra izany, izay hatao isaky ny renivohi-paritra, ary hiarahana amin’ny solontenan’ny ministeran’ny Fitsaràna sy ny mpitandro ny filaminana.